नगरको अभिभावक | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
भारतमा लकडाउन भइसकेपछि अब नेपालमा पनि कोरोनाले गर्दा लकडाउन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो । त्यसैले हामीले कोरोनाबारे मानिसलाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने ठान्यौँ । हामी सबै मिलेर नगरपालिकाभित्र टोलटोलमा माइकिङ गर्न थाल्यौं । कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने सन्देश तयार गरेर चारवटा गाडीमा ती सन्देश बजाएर गाडी डुलायौँ । साथै स्थानीय टेलिभिजन, पम्पलेटमार्फत पनि हामीले घरघरमा प्रचार-प्रसार गर्‍यौं । मान्छे भयभीत नहोऊन्, सर्तक भने होऊन् भनेर लकडाउन हुनुअघि यसो गरेका थियौँ ।
हाम्रो जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आउने मान्छेको स्वास्थ्य जाँच गर्न वालिङ नगरपालिकाको मुख्य प्रवेश नाकामा हेल्थडेस्क राख्यौं । बाहिरबाट आउने मान्छेको ज्वरो थर्मल गनले जाँचेर ज्वरो आएको भए १४ दिन क्वारन्टिनमा राखेर मात्र घर जान दिने नियम बनायौं ।
बाँके, बर्दियाका धेरै मानिस लकडाउन भएपछि कास्की र मुस्ताङ जस्ता जिल्लाबाट वालिङ हुँदै पदैल घर फर्कंदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको पाइतला फुटेर रगत बगेको थियो । यस्तो विपत्‌मा हामीले आफ्ना नगरवासीलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ । उहाँहरूलाई वालिङमा खानाको व्यवस्था गर्‍यौं । अरू संघसंस्थालाई पनि सहयोग गर्न आह्वान गर्‍यौं । उहाँहरुले पनि बाटोबाटोमा पानीको व्यवस्था गरी सहयोग गर्नुभयो । एक रात वालिङमै बसाएर उहाँहरूलाई अर्को दिन घर जाने प्रबन्ध मिलायौं ।
लकडाउन लागू गरेको केही दिनपछि सरकारले लकडाउनले गर्दा हातमुख जोर्न समस्या भएका व्यक्ति, परिवार, समुदायलाई राहत वितरण कार्यविधि बनायो । हामीले त्यही कार्यविधिका अनुसार नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर पहिलो चरणमा ३१ सय परिवारलाई राहत दियौं । अर्को पटक भने हामीले श्रममा जोड दियौं । एकल महिला, भिन्न क्षमताका साथै काम गर्न नसक्नेलाई राहत दिने व्यवस्था गर्‍यौं । त्यो पनि जाँचेर मात्रै राहत दिने गर्थ्यौं । जो काम गर्न सक्छन् उनीहरूलाई काममा बोलायौं । काम गरेबापत पैसा वा चामल दिने गरेका छौं । हामीले उनीहरूलाई कुपनमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छौं । राहतले मान्छेलाई अल्छी बनाउँछ । लकडाउनले धेरैलाई दुःख भएको छ । त्यो कुरालाई ध्यान दिएर हामीले विकासका काम गर्न दिएका छौं, प्रशासनले रोक्न खोजे पनि ।
सुरुसुरुमा राहत वितरण गर्दा राहत दिनेले फोटो खिच्न थाले । हामीले कसैले फोटो खिचे राहत जफत गर्छौं भन्यौँ । मान्छेको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर राहत वितरण गर्दा फोटो खिच्ने प्रवृति रोकेका हौं । त्यसपछि फोटो खिचेर कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेनन् । अहिले समस्या परेर राहत लिन बाध्य मानिसलाई विचरा बनाएर फोटो सार्वजनिक गर्नु त भएन नि । आज धनी भएको मानिस भोलि गरिब हुन सक्छ, आजको गरिब भोलिको धनी हुन सक्छ ।
अहिले आफ्नो घर फर्कने लहर चलेको छ । हामीलाई देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँबाट विशेष गरी भारतबाट फोन आउन थाले हामी आफ्नो घर फर्कन चाहन्छौं भनेर । उनीहरुले भनेका थिए — हामी आफ्नै ठाउँमा काम गर्न चाहन्छौं । हामीलाई आफ्नो ठाउँ आउने प्रबन्ध मिलाइदिनु पर्‍यो । हामीले घर आउन चाहनेहरूको तथ्यांक संकलन गर्न थाल्यौं । यस्तो विपत्‍मा आफ्ना नगरवासीलाई हामीले सहयोग नगरे कसले गर्छ भनेर हामी सबैले उहाँहरूलाई सुनौलीबाट घरसम्म ल्याउने निर्णय गर्‍यौं । अहिले हामीले एक दिनमा ४० जना जतिलाई सुनौलीदेखि यहाँसम्म बसमा ल्याउने गरेका छौं । यहाँ ल्याइसकेपछि चेकजाँच गरेर मात्रै घर पठाउने गरेका छौं । अहिलेसम्म हामीले दुई सयको आसपासमा बेड बनाएका छौं ।
पहिले पटक क्वारन्टिन बनाउँदा केही मान्छेले विरोध गरे । हामीलाई गालीगलौज गरे, धम्काए । पहिलो पटक क्वारन्टिनमा बसाउँदा अत्यन्त गाह्रो भएको थियो । कतिले ठूला कुरा गरे, तर्साए, पख्लास् तँलाई भोलि भोट चाहिएला पनि भने । तर हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ । भोलि तपाईंलाई केही भयो भने कहाँ राख्ने ? अहिले विपत्‍मा एकअर्कालाई सहयोग नगरेर छिछि र दुर्दुरको व्यवहार गर्दा भोलि तपाईंलाई पनि अरूले त्यस्तै गर्‍यो भने तपाईंको मनमा कस्तो हुन्छ ? भनेर हामीले भन्यौं । वडा सदस्यदेखि लिएर राजनीति दलका सबै मिलेर सम्झायौँ । रोगसँग आत्तिने होइन, डराउने होइन सबैले योसँग लड्न साथ दिए हाम्रो गाउँमा यो रोग फैलदैन भनेर सम्झायौ । बिरामी हुनु अपराधी हुनु त होइन नि भनेपछि उहाँहरु निःशब्द हुनुभयो । उहाँहरूलाई आत्मग्लानि भयो होला । त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो ।
त्यसपछि हामीले आमा समूह जस्ता समूहको सहयोग लियौँ । उहाँहरूलाई टपरी गाँस्ने काम दियौँ । स्थानीय कल्बका मानिसहरूलाई एकअर्काबाट टाढै बसेर बिरामीहरूको सेवा र रोगबारे थप प्रचार-प्रसार गर्न लगायौं । यस्तो गर्दा एउटा त अपनत्व भयो । अर्को उनीहरूलाई पनि अहिलेको विपत्‍मा आफूले पनि योगदान गरेको अनुभूति भयो । त्यसैले पनि होला उहाँहरू अहिले आफूले सकेका तरकारी, खानेकुरा लिएर आउने गर्नुहुन्छ । ‘केही सहयोग चाहियो भने हामीलाई भन्नुहोला’ भन्नुहुन्छ । यो देख्दा मनमा आनन्द लागेको छ । आफ्ना नगरवासीले यसरी सहयोग गरिदिंदा मनै फुरुङ्ग भयो । मलाई काम गर्ने थप जोसजागँर आएको छ । अहिले क्वारन्टिनमा बस्नेहरूलाई ‘तपाईँहरु यहाँ बसेको १४ दिन भयो, घर जानुहुन्छ ?’ भन्दा ‘जति दिन बस्नुपर्छ बस्छौं’ भन्नहुन्छ । अहिले सबै जना सहयोगी हुनुभएको छ । नागरिकको सहयोगले गर्दा अहिले हामीलाई क्वारन्टिन चलाउन सजिलो भएको छ । पहिले त स्वास्थ्य सामग्री किन्न पनि गाह्रो भयो । मास्क कतै थिएन । त्यसपछि हामीले ब्लाकमा भए पनि स्वास्थ्य सामग्री किन्यौँ । अहिले भने सजिलो भएको छ । हामीले दीर्घरोगीका लागि लकडाउन हुनुअघि नै आठ महिनासम्म पुग्ने औषधी जम्मा गरेका थियौं । यहाँ नपाएका औषधी अरू जिल्लाबाट ल्याउने गर्छौं ।
चुनावका बेला हामी गाउँ जाँदा भोटको आश गरेर जान्थ्यौं । अहिले भने हरेक नागरिकप्रति दायित्वबोध भएको छ । यस्तो विपत्‍का बेला जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या नसुने कसले सुन्छ कसले गर्छ भन्ने लाग्छ । म बिहान ८ बजे नगरपालिका पुग्छु । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी त्यहाँ जम्मा हुन्छौं । भोलिपल्ट कसले के गर्ने भनेर अघिल्लै दिन हाम्रो छलफल भइसकेको हुन्छ । त्यही अनुसार हामी को कता जानुपर्ने हो जान्छौँ । साँझ फेरि कार्यालयमा जम्मा भई काम गर्दा कसलाई के अप्ठेरो भयो ? अवस्था कस्तो छ ? दिनभरिको विवरण हेर्छौं ।
म अहिले आफ्नो घरको भन्दा पनि समाजको बढी अभिभावक हुँ । यसमा मेरो घरपरिवारले पनि साथ दिएका छन् । कार्यालयबाट म कहिलेकाहीं राति अबेर घर पुग्छु । आफ्नो घरमा अलगै कोठमा सुत्छु । खानपिन घरपरिवारले व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् । क्वारन्टिनको सुरुदेखि म आफ्नो घरमै आइसोलेसनमा बसेको छु । गाउँगाउँ जाने हुनाले मलाई कोराना सरिहालेमा पनि परिवारलाई नसरोस् भनेर म परिवारका सदस्यबाट टाढै बसेको छु ।
हामी अहिले विभिन्न सीपको प्रयोग गरी वालिङ नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लागेका छौं । सबै जना सकारात्मक देखिनुभएको छ । अहिले विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका नागरिहरूलाई हामीले जुन ठाउँबाट आउनुभएको हो त्यहाँ के काम गर्नुहुन्थ्यो भनेर कामको विवरण संकलन गरिरहेका छौं । त्यसका लागि छुट्टै टिम बनाएका छौँ । उहाँहरूको अनुभवका आधारमा रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाउँदै छौँ । यस पटकको बजेट हामीले त्यसैमा केन्द्रित गरेका छौं ।
यहाँका नागरिकमा पहिलेका तुलनामा अहिले डरत्रास केही कम भएको छ । सीमानाकामा कडाइ गर्दा झनै अप्ठेरो स्थिति आउन सक्छ, लुकीछिपी पनि मान्छे आफ्नो घर आउन खोज्छन् । त्यसका सट्टामा उनीहरूलाई ल्याएर स्वास्थ्य परीक्षण गरायो भने संक्रमण फैलन पाउँदैनथ्यो । तर खोइ सरकारले के गर्छ ? जे भए पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रियता जमिन मात्रै होइन नागरिक र माटो दुवै हुन् । राहतको नाममा केन्द्र सरकारले सहयोग नगर्दा अलि मन दुखेको छ । हामीले हाम्रा नागरिकलाई बचाउन अरू विकास योजनाको बजेट प्रयोग गरिरहेका छौं ।
यो कथा स्याङ्जा वालिङ नगरपालिकाको नगरप्रमुख दिलीप प्रताप खाँड संग गरीएको कुराकानीमा रहेर अनुषा स्वाँरले लेख्नु भएको हो ।